"Evelele" umqondo. Kusho ukuthini?
"Evelele" - nalokho elikumelelayo? I evelele, odlulele abanye lutho. Igama elithi isetshenziswa kokubili izinto Animate noma cha. Ngokuvamile buvela ukuhlaziywa ubudlelwane obufanele. Nokho, kungase kusetshenziswe kwezinye izingqikithi kanye netakhiwo temagama.
"Evelele": kusho ukuthini othandana naye?
Njengoba sekuphawuliwe kakade, igama elithi "evelele" uvame okukhulunywe indima nesikhundla omunye abalingani othandweni (umshado) umfelandawonye. Uqondeni? Ngokwesibonelo, lapho inhloko yomkhaya - indoda, futhi lokhu kubonakala elikhulu ekuthandweni kwayo abantu sezinqumo ezibaluleke ngokuphathelene izimpilo wonke amalungu alo. Kulokhu, kubalulekile evelele phezu umkakhe. Futhi (okungenani ngokucacile) uvumelana izenzo oshade naye, futhi kufanele abanye imithwalo ngekusasa layo kuso. Umqondo "ukubusa" isasetshenziswa sokuba ukuhlaziywa emkhakheni ngokocansi zokuphila imibhangqwana. Ngokwesibonelo, embhedeni umlingani liziphatha njengoba umhlaseli, uthatha isinyathelo, kanjalo bazithobisa indoda. Bese usho unkosikazi obusa umyeni wakhe. By endleleni, emindenini zanamuhla ukusatshalaliswa izindima - Kuyaziwa, emazweni amaningi. Ososayensi bathole ukuthi amadoda bazimisele kakhudlwana ukuzamukela asinikeza amadoda abo ingxenye imisebenzi yabo.
"Evelele" Kuyini lokhu nezinye izenzakalo
Leligama lisetshenziswa ezincwadini futhi ukukhuluma ugcizelele oqavile into impahla. Ngokwesibonelo, kukhona umqondo kwezomnotho njengoba "inkampani evelele". Kusukela umongo, ungakwazi ukuqagela ukuthi le nhlangano kunezinzuzo ezithile ngokuhamba evamile yebhizinisi nokuphatha. Futhi, igama elithi "evelele" lingasho yokudlanga kokuxhashazwa:
yimuphi umbala owodwa kohlelo jikelele;
ukunambitheka e isidlo Culinary;
Umkhuba fashion, ezombusazwe;
owesilisa endle, njll
"Linqobe": kuyini nokuthi sivezwe kula Ubuhlobo
Ukubuyela udaba ka ubudlelwane obufanele, kumnandzi kubaluleke kakhulu nokuningi kubo bonke abantu. By the way, ungakwazi linqobe hhayi kuphela e inyunyana "indoda-owesifazane", kodwa futhi sivule "umngane umngani", "umngane umngani," "Umfowenu, mfowethu," njll Abuse nguye has a indzima lesembili ubuhlobo. Ngakho omunye umlingani kwakuyoba isikhundla aphansi. Cishe njalo, lokhu ukusatshalaliswa kungenxa izimfanelo ezithile ubuntu. Lokho, abantu evelele - labo lapho wabeka izici umholi. Basuke izimpawu ukuvuthwa futhi ikhono lokwenza izinqumo, baqikelele imiphumela yabo, ikhono ukuhlela. Nakanjani, banayo umthethosisekelo eqinile oqine psycho-ngokomzwelo njengoba kuqhathaniswa nabanye.
"Evelele": kusho ukuthini emkhayeni
Kaningi kukhona imindeni lapho unkosikazi obusa womshado. Ekuhlanganisweni enjalo ke ngisho noma engakathenjiswa umshado ongaphumelela kwi-career, futhi ehlezi ekhaya, ilawula ngokugcwele izindaba zayo, bembonisa kanjani kugqugquzelwa, nabo ukuxhumana, njll Ngaphezu kwalokho, abizele kanjani ukuchitha isikhathi sokungcebeleka, ukuchitha ibhajethi umndeni, indlela ukufundisa izingane. Ngokuvamile amandla ukuboniswa yenzeka yomphakathi: nomkakhe bangase bakwazi hlambalaza nokululazeka nomfazi ebukhoneni abangabazi. Baye Nokho, kuphakamisa umbuzo mayelana nokuthi uluphi uhlobo umfana yena, uma lokho kuhlupheka njalo. Kodwa isahlulelo eyodwa emaceleni lapha - into awubongwa. Akumangalisi ukuthi indoda nomfazi - omunye uSathane.
Ukuxhumana okungekho emthethweni. Izinhlobo futhi izindlela zokuxhumana
Portrait kwenqondo yomuntu: isibonelo ngokubhaliwe Platonov
Ekugcineni Funda mayelana yini okumele uyenze uma akukho
Imisebenzi kwengqondo: izici
Ukuziphatha Conformal yomuntu emphakathini
Life elahlekile nencazelo yalo - ukuthi yenzeni, kanjani ukuphila? iseluleko wezengqondo
Kuyini ukufingqa? ukuhlaziywa enemininingwane
Sihlobisa indlu ngezandla zethu. Yonke into yokunethezeka ekhaya
Crab isaladi nge iklabishi, iresiphi elula
Indlela ziqhume imbewu ukutshala utamatisi?
Ingane Lokukhanya: ukuhamba
Komzimba ukudla izinja, izimpawu yayo kanye nokwelashwa
Territory emthethweni wamazwe omhlaba: umqondo nezinhlobo
Eugene Rasskazova: Biography iziqu "American Idol"
Aleksandra Fedorova wamapulani nge imiklomelo eminingi
I diclofenac izidakamizwa: yokusetshenziswa.
Umsebenzi wokudala ukuthuthukiswa engaba zezingane